(tonga teto avy amin'ny Antartika)
I Antarktika dia ny tendrotany atsimo amin' ny Tany sy ny manodidina azy. Antarktika koa ny anaran' ny kôntinenta misy ny tendrontany atsimo. I Antarktika dia kôntinenta iray any atsimon' ny Tany manana velarana 14 tapitrisa km2. Ny habeny dia mbola kely noho i Azia, i Afrika na i Amerika; i Eoropa sy i Oseania ihany no kely noho izy. 98%n' ny velarantaniny dia ranomandry manana hatevina 1 600 m, izay no tsy ahafantarana ny endriky ny ambanitaniny, fantatra fotsiny ankehitriny fa misy tandavan-tendrombohitra sy farihy ambanin-dranomandry ny ao, ohatra ny farihy Gamburtsev.
Kôntinenta mangatsiaka, maina ary be rivotra indrindra eto an-tany i Antarktika; maina satria latsaky ny 200 mm ny rotsak' orana eo amin' ny morontsiraka (ary mbola latsak' izany ny rotsak' orana any amin' ny faritra afovoany).
Tsy misy mponina tera-tany i Antarktika ary ny mipetraka any amin' izao fotoana izao dia mpahay siansa ny ankamaroany. Voninkazo mahazaka hatsiaka sy aizaina ary hamaina ihany no miaina any miaraka amin' ny karazam-borona sy trondro ary biby mampinono ihany no any.
Ny teny hoe Antarktika dia avy amin' ny teny grika ἀνταρκτικός / antartikós, izay midika hoe "mifanohitra amin' i Arktika". Tamin' ny 1820 ilay kôntinenta no hita voalohany ary ny tafika rosiana nentin' i Mikhaïl Lazarev sy i Fabian Gottlieb von Bellingshausen no nahita azy. Tsy dia nahaliana olona firy ilay kôntinenta noho ny tsy fisian' ny harena an-kibon' ny tany sy ny tontolo tsy azo iainana any aminy ary ny fitokana-moniny.
Araka ny fifanekena momba an' i Antarktika nosoniavin' ny firenena roa ambin' ny folo tamin' ny taona 1959 sy narahan' ny fifanekena natao tao Madrid tamin' ny taona 1991 dia manana sata manokana i Antarktika: tsy azo anaovana hetsika ara-miaramila any, sady tsy azo alaina ny harena an-kibon' ny tany raha tsy momba ny fikarohana ara-tsiansa no tanjony.
Ireo kontinenta[hanova | hanova ny fango]
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Antarktika
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antarktika&oldid=998857"
Voaova farany tamin'ny 11 Desambra 2020 amin'ny 11:47 ity pejy ity.